पूर्वराजा जहाँ जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ सम्हाल्नै नसकिने गरी जनताको भीड लाग्छ र जयजयकार हुन्छ । आखिर राजतन्त्रमा के छ त्यस्तो आकर्षण र जयजयकार गर्न जनता निस्कन्छन् ?
यसपटक झापादेखि मोरङसम्मै यो दृश्य दोहोरियो ।
नेताहरु चुनाव भन्छन्, यिनै जनता लाम लागेर मतदान गर्छन् । जब पूर्वराजालाई देख्छन्, राजतन्त्र जिन्दावाद भन्छन् । के भइरहेको छ यो देशलाई ? जनताको यो द्वैध मानसिकता के हो ? जनता अनिश्चयमा छन् कि उनीहरु चिची पनि पापा पनि भन्ने मनस्थितिका बन्दी भइरहेका हुन् ?
हामी जनता छँदैछौं, किन साइत कुरिरहनु पर्ला र ? अघिल्लो साता मोरङको विराटनगरस्थित काली मन्दिरमा पूजा गर्न पुगेका पूर्वराजाको सुस्तपनालाई हेरेर एकजाना राजावादीले यस्तो आक्रोस मिश्रित प्रश्न गरेका थिए । त्यसो त विराटनगर, जो गणतन्त्रवादीहरुको गड मानिन्छ, खासगरी नेपाली कांग्रेससमेत गणतन्त्रवादी भइसकेपछि, विराटनगर गणतन्त्रमय हुने नै भो । त्यही विराटनगरको महेन्द्रचोकमा पूर्वराजा के पुगेको थिए, राजा ल्याउँछौं, ल्याउँछौं, नेपाल बचाउँौं भन्ने नारा लाग्यो ।
जनताको भीड हेर्दा अनुभूति हुन्थ्यो– गणतन्त्र भन्ने भाँडतन्त्र अन्तिम पडावमा छ । भन्नेले भन्छन्, मात्र एक जनमुक्काको धक्का लाग्यो भने यो ढल्छ । त्यस्तै धक्का चाहन्छन् आमनागरिक पूर्वराजाबा ट । अव पूर्वराजाले मन्दिर मन्दिर गएर भगवानलाई दूध चढाएको मात्र हेर्न चाहन्नन् जनता । सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गरेर नेत्वत्व लिएको हेर्न चाहन्छन् । यस्तो प्रकृया त धेरै पटक दोहारिसेको छ । पूर्वराजाको सवारीहुन्छ, जनतासँग सम्बाद पनि हुनछ, मन्दिरहरुको दर्शन पनि हुन्छ, त्यसपछि... पूर्वराजाको काठमाडौं फिर्ता हुन्छ । अध्याय समाप्त हुन्छ ।
स्वयम् सत्ताधारीहरुले सुशासनको कमीले गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो भएको कुरा श्वेतपत्रमा देखाइसके । प्रधानमन्त्री लगायत प्रधान सेनापतिसम्मले पृथकतावादीहरुले टाउको उठाइरहेका छन् भनेर बताइसके । मुलुकको संस्कृति, रितिरिवाज र मौलिकपनलाई ध्वस्त नष्ट गर्न विदेशी र विदेशी पैसाको खोलो बगेको कुरा सत्ताधारीहरुले स्वीकारिसके । यसको अर्थ यो गणतन्त्र फाप शिद्ध भएको छैन । गणतन्त्रले काम गरिरहेको छैन र नागरिक समाज उद्वेलित छ ।
दैनिक काम कारवाही चलाउन समेत धौ धौपर्ने गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइएको कुरा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले देखाइसके । कम्तिमा एउटा सर्वमान्य संस्था भइदिइको भएयस्तो आर्थिक अराजकता देखिने थिएन ।
विद्वानहरु भन्छन्– नेपाली जनताले नै राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । हिजो जसले जसले कथित आन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटाए, तिनीहरु नै फेरि राजालाई पुर्नस्थापना गर्न सडकमा आउनुपर्छ । पूर्वराजाले त संकेत सम्म दिने हो, जुन पटक पटक आइसक्यो । बाँकी काम नागरिकको हो । नेपाललाई टुक्रन नदिने हो भने नेपालीत्व, मौलिक संस्कृति र रितिीधर्मको रक्षा गर्ने जिम्मा नागरिक हो । आफ्ना सन्ततीलाई पछिसम्म नेपाली भएर बाँच्न दिनुछ भने राजसंस्था अपरिहार्य देखियो । यो बाहेक अरु कुनै मार्ग छैन मुक्तिको ।
हिजो अनेक गर्दा पञ्चायत चलेन । अव ठूला ठूला शक्तिलाई साइड लगाएर भ्रष्टहरुले गणतन्त्र चलाउने ? जबसम्म सबै शक्तिलाई समेटिदैन, तवसम्म नेपालबाट संक्रमणकाल सकियो भन्नु हास्यापद कुर हुनजान्छ ।
अहिलेसम्मलाई एउटा प्रयोग नै मानौं । प्रयोग फेल भइसक्यो । अघि ०१७ सालमा गरिएको पञ्चायत नामक प्रयोग झैं असफल साबित भयो जनआन्दोलनपछि आएको गणतन्त्र । अझै क्रान्ति गरेर असहज र अराजकता निम्त्याउने कि सरक्क परम्पारगत शक्ति राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्ने । शान्तिपूर्वक मेलमिलापतिर जान पनि सकिन्छ । अव पनि जनआन्दोलनको झैं जोरजबरजस्तीको धङ्धङे पालिरहनु भएन । अव क्षमता नांगिसक्यो, सपना देख्नु र देखाउनुको औचित्य समाप्त भइसक्यो ।
यसैवीच नेपालका नदीहरुमा धेरै पानी बगिसक्यो । नागरिक अवगत भइसक्यो कि बाघको खोल ओढेर स्याल आएको रहेछ । तसर्थ आफ्नो आफ्नो राजनीतिक दलको सेफ ल्याण्डिङ खोज्ने हो भने अव तीदम्भहरु त्यागौं । आआफ्ना उदण्ड कार्यकर्ताहरुलाई सम्झाऔं । अनि खुरुक्क राजसंस्थासँग मेलमिलाप गर्दै राष्ट्रिय अस्तित्व कायम राखौं । आजको राजनीतिक समस्याको समाधान यही नै हो ।
मेलमिलाप र सहकार्यको राजनीति गरिएन र अहंकारी व्यवहार देखाइयो भने यस्तो चरित्र कसैको पनि हितमा हुनेछैन । कम्तिमा पनि लोकतन्त्रको विकासक्रम र संस्थागत गर्ने कार्यमा सहमत हुने हो भने पूर्वराजासहितका राजीतिक शक्तिहरुसँग वार्ता गर्नैपर्छ, वार्ता नै शान्ति र समुन्नतिको प्रत्याभूति पनि हो ।
देशमा शान्ति, स्थिरता कायम गर्न र सुशासन दिन सरकार तैयार छ भने यस्तो स्थिति ल्याउनका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग वार्ता र मेलमिलाप गर्नैपर्छ । कसैले ओलीको सत्ता खोस्नेवाला छैनन् । ओलीले जीवनमा राम्रो काम गर्न चाहेका हुन् भने उनले राजनीतिक माहोललाई स्वच्छ पारिदिनुपर्छ । यही स्वच्छतामा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ ।